Muuri News Network » DEG DEG Qodobo horu-dhac ah oo lagu heshiiyay shirka Madasha ee Baydhabo.
DEG DEG Qodobo horu-dhac ah oo lagu heshiiyay shirka Madasha ee Baydhabo.
Jun 24, 2016 - Comments off
Madaxda Soomaalida iyo Beesha Caalamka ee shirka uga socda magaalada Baydhabo ayaa ku heshiiyay qodobo horu dhac oo ku saabsan doorashada Soomaaliya, iyadoo lagu wado in gelinka dambe ee maanta war murtiyeed laga soo saaro shirka Madasha Wada-tashiga Qaran ee Hoggaamiyeyaasha Soomaalida.
Wasiirka Warfaafinta iyo Wacyi galinta Bulshadda Koofur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayaa sheegay in qodobo horu-dhac ah la gaaray, isagoo intaa ku daray in wax ka bedel lagu sameeyay Guddigii doorashooyinka uu magacaabay Madaxweynaha.
Ugu dambeyntii, Goobaha doorashooyinka ka dhici doonaan ee magaalooyinka Maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegay in Beesha Caalamka inay bixin doonto qarashaadka ku bixi doono.